Na-ekpe ekpere ka Mary bụ unbiblical | Apg29
Na-ekpe ekpere ka Mary bụ unbiblical
The Catholic Church bụ n'ebe dị nnọọ anya na okwu nke elu nke Mary na ya mere na-anya n'ebe ihe Baịbụl kwuru banyere ya.
Pope na-agbasa incense tupu a akpụrụ akpụ nke Mary na nwa Jesus.
Na ozizi ndị ozi na New Testament bụ nke ozizi na malitere na gburugburu Mary, mgbe ahụ anyị nwere ike ikpo ha dị ka unbiblical.
Ozizi a nwere ya malitere n'ikpere arụsị nke Queen nke heaven
Ya mere, ọ bụ ihe amamihe na-adịghị ozizi natara na a ga-ekpughere n'ụzọ doro anya. E nwere akụkọ ihe mere eme site na a ofufe dị iche iche omenala na ke anwansi nke "Queen nke Eluigwe". N'ebe kasị azụ ike deere azụ Nimrod nwunye, Semiramis. Inwe me ya nwa Tammuz, ọ kpọ ma eze nwaanyị nke eluigwe na nne mmiri chukwu. (1 Num. 10: 8-9).
Dị nnọọ aha "eze nwaanyị nke eluigwe" bụ Catholic Church, a aha e nyere Mary. Mgbe ị na-ahụ ihe ndị a niile akpụ nke Mary na a nwatakịrị, ya mere, bụ onyinyo nke Nimrọd nwunye ya na nwa a oyiri nke ha.
Echiche nke gudamodern nwa ebiwo on dị iche iche omenala. The òtù nzuzo nyefe na Catholic Church na-ekwere ụfọdụ ndị ọkà mmụta sayensị si n'agbụrụ 300 na narị afọ na a mụrụ n'Ijipt ebe ha na-efe Isis na nwa-ya nwoke Horus. The oyiyi bụ pụtara ìhè. Lee foto.
Na The New Encyclopedia Britannica, i nwere ike na-esonụ: "ịsọpụrụ nne nke Chineke natara a agbam ume mgbe Christian Church ghọrọ [Rom] alaeze ụka n'okpuru Constantine na ndị Jentaịl na pụta akwabawo chọọchị. ... ha piety na okpukpe nsụhọ nwere ọtụtụ puku afọ e ekara site ofufe nke 'Ukwu Nne' na 'Chineke na-amaghị nwoke', a mmepe na dugara sitere ochie ndiife okpukpe nke Babylonia and Assyria. "
Ebe a, anyị nwere ike ịhụ ebe a ofufe nke chi nwanyị si n'agbụrụ na-ekpere arụsị okpukpe, na-adịghị na okwu Chineke, ma site na ikpere arụsị. Naanị a na-na-anya-opener, na na nsọtụ elu na-efe ofufe nke Mary,
The Catholic Catechism kwuru na Mary bụ isi ihe niile, ma Bible na-ekwu na Jizọs bụ: "Ha bụ nna, na nke onye Kraist-abịa dị ka a na madu, onye bụ isi ihe niile, na Chineke gọziri ebighi-ebi. Amen. "Rome. 9 5.
Nke a bụ nnọọ ihe ịtụnanya na-ekpughe na Catholic Church na-akụzi ihe megidere Bible - onye a ga-ezu na-ahapụ a na chọọchị. Otú ihe ị na-agbalị izo ihe dị otú doro anya, ọ bụ naanị ihe efu mgbalị achọghị ma ọ bụ na-apụghị ịhụ ihe doro anya na ihe na-abụghị nke hụrụ na dị nnọọ tụnyere ihe Baịbụl kwuru na ihe ndị Catholic Church na-akụzi.
Ọ bụghị ọchịchọ nnyocha dị ka nke a edere, na ọ bụ olileanya na ndị bụ ndị nke a na chọọchị na ndị Kraịst ndị ọzọ na-enwe anya-ya abua ghere oghe. Ị kpere ekpere ka Mary, na-arịọ Chineke maka mgbaghara.
Jizọs zara, "Ọ na-dere, sị: Jehova, bú Chineke ị ga-efe na-nanị ya ka ị ga-efe." Lk. 4: asatọ
Na-ekpe ekpere ka Mary bụ ihe Akwụkwọ Nsọ na-ezi ihe
Ọ bụ na anyị mụta nwa ihe niile Catechism kwuru banyere Mary, anyị ga-amalite nnukwu ohere maka ya. Ọ nwere ike na-mere na-enweghị ka anyị ga-ahụ ihe na-akwado na-azọrọ na Bible, mgbe ahụ, anyị na-adịghị na-ewe iji obi a. Anyị kwesịrị ịdị na oku na-aga na 1 Ndị Kọrịnt. 4: 6. "N'ihi na ị na-amụta na-achị mgbe ọ na-abịa anyị ghara ime ihe karịrị ihe ndị Akwụkwọ Nsọ na-ekwu."
Ọ bụrụ na ị na-aga New Testament na-ezi onye na-achọta ọ bụghị ihe niile ekewet Mary. Anyị na-adịghị ahụ mgbe ọ bụla mgbe na ndịozi kụziiri Mary Catholic Church na-eme. Anyị na-ajụ ndị a na-akụzi n'ihi na ha na-agaghị tọrọ ntọala na Akwụkwọ Nsọ.
The ozizi ha na narị afọ ndị mbụ. Ọ bụ nanị mgbe a ole na ole narị afọ dị ka ha na-amalite iputa, ndị Council of Nicaea ke 325, mgbe ahụ, na Ephesus 431 transforms mmadụ Mary Nne nke Chineke. Mgbe ahụ, ọ na-akawanye aha dị iche iche förebedjerska, na-aga n'ihu na-amaghị nwoke, na-enweghị mmehie, nådeförmedlerska na ngalaba-redeemers.
The Catholic Church bụ nnọọ ogologo na okwu nke elu nke Mary na ya mere na-anya n'ebe ihe Baịbụl kwuru banyere ya. Na paragraf 969 nke Catholic Catechism kwuru nke a: "Nke a onodu nke Mary na iji nke amara malite na nkwenye ọ nyere na okwukwe na Annunciation na nke o doro anya na rapagidesiri ike cross. Mgbe ọ rịgooro n'eluigwe, ọ hapụrụ ya redemptive ozi. Ọ ga-anọgide na-enweghị nkwụsị ruo mgbe niile na-apụta ka o zuo okè ruo mgbe ebighị ebi. Site ya manifold intercession ọ na-ewute anyị na onyinye nke nzọpụta ebighị ebi .... Ya mere, Onye agọziri agọzi Virgin bụ ẹdikot dị Advocate,-echebe, na-enyere aka igbapu na ibuga igbapu. "
Nke a na-ekewet Mary "ya redemptive ozi." Ọ bụ Jizọs, na Jizọs, bụ onye a na-azọpụta ozi. Ọ na-ekwu Katọlik na Mary na-nwere ya. Nke a bụ ihe tinye-na na na ihe Okwu Chineke kwuru.
Tụlee nke a na Chineke doro anya ozi: "Ma e nwere nzọpụta, na igwe na-adịghị ndị ọzọ aha na ndị mmadụ nwere bụ nke anyị ga-azọpụta." Ọrụ Ndịozi. 4:12
The otu ihe ahụ nwere ike ịbụ nke ọma karịrị ihe Akwụkwọ Nsọ kwuru mgbe ị na-ekwu: "Ya mere ẹdikot agọziri agọzi Virgin" Jizọs kụziiri anyị otú e si ekpe ekpere, sị: "ihe ọ bụla ị na-arịọ m aha m ga-eme, na Nna kwesịrị otuto na Ọkpara ya. "John. 14:13. Ọ bụ mgbe ntụziaka Jizọs, ọ bụghị Catholic Church si katkizim, nke anyị ga-agbaso mgbe anyị ikpe ekpere.
Mary mụrụ enweghị mmehie bụ nwekwara a emeju e mere na Catholic Church, nke Bible na-ekwu na mmadụ niile emehiewo (Rom. 3:23). Nke a na-kwuru dị ka na-adịbeghị anya dị ka a malitere izi ozizi afọ 1854th
Ka e mesịrị, ndị chọọchị kweere na Mary bugoro heaven, ahu na nkpuru obi, nke a mere na 1950 na All Saints 'Day chịrị mgbe Pope Pius XII, ndị Catholic Church na-akụzi Meri mbanye heaven. Ọ na-e kere ndị na-esonụ n'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ na Mary: "Virgin-eguzogide ọgwụ, ọ okokụre ndụ elu ala ya N'ezie, ahu na nkpuru obi banyere n'ime eluigwe otuto."
Anyị nwere akwụkwọ na-egosiputa Pope kpọsara na 1950 ma ọ bụ karịsịa kwesịrị ịrịba ama na Mgbakwunye mere ozugbo mgbe a ozizi ọhụrụ guzosie ike dị ka Catholic ozizi kwuru na-esonụ banyere onye ọ bụla, "n'afọ ofufo ga-anwa anwa agọnahụ ma ọ bụ doro anya na anyị na-akọwa, na ọ gwara na ọ kpamkpam adawo site na Chineke na Catholic okwukwe. "
Ee, onye na-echebara a iyi egwu na dokwuo anya na mmụọ nke Pope ebe a na-eme mgbe na guzosie ike ozizi a, na ị ahụ adawo n'ebe Chineke na Catholic okwukwe. Firstly, ọ dịghị Chineke okwukwe, ọ na-apụghị ịchọta okwu Chineke, ya mere, ya mere ọ bụ kama na-abụghị, na ọ na-arahụ site na Chineke na ocheeze ma ọ bụrụ na onye na-emesi ozizi a, iwu na 1950. Onye ahụ ga-ada si Catholic okwukwe kwesịrị kama ike-ezo dị ka a ike ihe ịrịba ama ọ bụghị ka e mebie iwu, na-enweghị absconds unbiblical ozizi, nke Baịbụl kpọrọ anyị ka anyị mee.
N'ihi na Catholic na-etinye okwukwe ha na nke a na chọọchị ga-esi ike ndị a egwu na-adịghị anabata nke a mmadụ mmụta. Ma eleghị anya, ọ na-eme gị egwu ka ha kwere na a na-anọgide na nke a na chọọchị, mgbe ahụ, nke a popu na nkwupụta natara ya iji kee ndị ahụ ọbụna ihe a na chọọchị na unbiblical ozizi.
Ị a Catholic, ezumike na nke a, ịrịọ mgbaghara na-enweta gospel delectable ike ntọhapụ na nnwere onwe na Jesus Christ.
Ekpere Mary bụ unbiblical
Meri center na Catholic Church dị nnọọ adị n'ezie na nnọọ ihe kacha njọ bụ na a na obscures Jizọs, bụ Ọkpara Chineke, Onye Nzọpụta nke ụwa. Ọ bụ banyere afọ 400 mgbe ndị Christian Church malitere na Pentikọst na Maria na-agbanwe agbanwe si mmadụ nkịtị na a Chineke ozi, na-na eze nwaanyị nke eluigwe, na ndị ọzọ na ndị ọzọ aha.
Ọ bụ site òtù nzuzo na omenala nke Mary na nwa awụ nwere propagated n'ime Catholic Church.
Nke a bụ a na omenala na pụta ihe karịrị narị afọ na Catholic Church. Ya mere, ọ dịghị ikike a ọdịnala mmadụ. Anyị Christian okwukwe dabeere na ikike nke Akwụkwọ Nsọ na n'ozizi ndịozi, na nke ghọtakwuo mbuli elu nke Mary site na ha anọghị. Ya mere, anyị nwere ike n'atụghị egwu ịtọhapụ anyị ozizi ya banyere Mary.
The Catholic Church malitere na a obere ndiiche si Bible na-akụzi na a na mpaghara. Ọ bụ sere a akara na alaka si ogologo akara ga-anya n'ebe si, ọzọ na akara na-adọrọ mmasị. N'ihi ya, ọ anọwo na-akụzi na Mary na Catholic Church.
Nke a na-adịghị dere ikpe onye Katọlik. Ị na-eto dị otú ahụ a na omenala nke Catholic Church, ọ dị mfe a ga-kpuo ìsì na-ezighị ezi na a ozizi. Nke a dere nwere ike hụrụ dị ka ngwá ọrụ ndị Katọlik na-agbaji a adịghị mma na-amụta na-enweta dum direction nke Jizọs, bụ onye na-azọpụta, ma si otú anyị kwesịrị ikpe ekpere ka Chineke.
Ọ bụ mwute na anyị na-arịba ama na Catholic Church bụ a chọọchị na ọtụtụ unbiblical ozizi, otu onye nke bụ onye òtù nzuzo nke Mary. N'ezie, n'ọtụtụ ụzọ, Mary mkpa karịa nwa-ya, Jesus, nke a na-ekwu na ihe niile banyere otú na-ezighị ezi i nwere ike inwe.
Ọ bụghị nanị na-anyagbu emede na ọcha ebere ka a amamihe na-adịghị na obibia nke Maria emebiwo. Anyị nwere nnwere onwe ikwu okwu na na anyị nwere ike iji nyere ndị Katọlik na-esi pụọ ọjọọ ozizi banyere Mary.
Ihe anyị na-ebe a dere banyere Catholic Church ọ bụla N'ezie ime otú a. A eziokwu bụ na Catholic Church na ozizi ya e weere doro anya na-ekpughe. Ya mere doro anya na na na ụlọ akwụkwọ maka banyere otu narị afọ gara aga dị ka akụkụ nke agụmakwụkwọ nke ụmụaka ụlọ akwụkwọ. Olee ihe ndị ọzọ anyị na-ekwesịghị ke ụka kpuchie na-doro anya banyere ihe ndị Catholic Church anọchi, mgbe mgbe na ala Akwụkwọ chere na nke a ga-abụ akụkụ nke akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ.
Anyị ga-aguputa ihe Akwụkwọ akụkọ ihe mere eme nke nna nke C. T Odhner. Nke a akwụkwọ ọgụgụ e ji ọtụtụ iri afọ maka agụmakwụkwọ nke ụmụaka ụlọ akwụkwọ. Ya mere a na-akọwa Catholic okwukwe na-ama na-agbasokarị tupu Ndozigharị nke Catholic ozizi na oru: "The Christian okwukwe e kwusara na nna nna anyị hà, ọ bụghị dị ọcha Christianity, dị otú ahụ e nwere na-emepụta na Nsọ, ma Catholic ozizi. Nke a bụ n'oge oge na-aga na-weere na ọtụtụ mmadụ chepụtara. Ha na-efe bụghị chi atọ n'ime otu bụ naanị ya, kamakwa, na ikekwe ọbụna ọzọ, "Nne nke Chukwu" (Virgin Mary na nsọ. Ntụgharị,-atụ egwu Chineke bụ onye, ​​mgbe ọnwụ ya ghọrọ were dị ka ihe dị nsọ na-efe ofufe dị chi. Ọ na-kweere na Pope of Rome bụ ya bụ Kraịst gọvanọ nke ụwa na nke dum Church of Jehova, Ya mere na-erube isi n'iwu ya niile na-akpọ ya "onye na Nna Nsọ." Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwara anwa na-emegide ya, e ahụhụ ịchụpụ, ie ekwe n'aka nnwekọ nke chọọchị na-efe ofufe na sacraments. "Ọgwụgwụ see okwu Odhner.
Ọ bụrụ na isiokwu a bụ oké egwu nke Catholic Church, ọ bụ ihe ziri ezi onye. N'ezie, nnyocha dị nnọọ nwayọọ tụnyere ihe ndị Chineke Kemgbe ụwa, a. Bụghị onye ọ bụla maara na ndị dị otú ahụ nnukwu aha dị ka Wyckliff, Huss, Luther, Calvin, Melanchthon, Knox, Tyndale, John na Charles Wesley chere na popu bụ oké nwaanyị akwụna dị ka a kọwara ná Mkpughe, na-agụ isi 17. Ọ na-ekwu nke Chineke ikpe nke nwaanyị akwụna ahụ.
Ọtụtụ n'ime ụka Protestantị na-gụnyere nke a na nkwuputa ha. Olee otú anyị pụrụ na oge anyị ileghara nke a? Olee otú anyị nwere ike ịga na njikọ aka ha na Catholic maka obosara anyagbu ije n'ihi? Ọ bụ oge anyị na ọgwụgwụ oge n'efu, ịghọta ihe doo anya anyị iso nwere na-aghọta anyị ikwere.
Anyị kwesịrị irubere Chineke isi ma Okwu ya karịa nkịtị na-anabata nke a na chọọchị ya unbiblical ozizi. Olee ihe ọzọ anyị nwere ike ikwu na anyị kweere na okwu Chineke na-eche na nke a na chọọchị bụ naanị otu onye n'ime ndị ọzọ niile na chọọchị dị iche iche?
Vecka 9, söndag 7 mars 2021 kl. 13:42